Asomafo Nnwuma 8 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 8:1-40
8 Saul nso penee kum a na wɔrekum no no so.+ Saa da no ɔtaa+ kɛse bi baa asafo a ɛwɔ Yerusalem no so; na wɔn nyinaa bɔ hwetee+ Yudea ne Samaria nsase nyinaa so ma ɛkaa asomafo no nkutoo. 2 Na mmarima nyamesurofo bi faa Stefano kosiee no,+ na wosuu+ no pii. 3 Afei Saul fii ase tuu n’ani sii asafo no so. Ɔhyɛnhyɛn afie mu kɔtwee mmarima ne mmea nyinaa, na ɔma wɔde wɔn guu afiase.+ 4 Ɛnna wɔn a wɔbɔ hwetee no kyin asase no so kaa asɛmpa no.+ 5 Na Filipo kɔɔ Samaria+ kurow no mu na ofii ase kaa Kristo ho asɛm kyerɛɛ wɔn. 6 Bere a nnipakuw no tiei na wɔhwɛɛ nsɛnkyerɛnne a Filipo reyɛ no, wɔde koma koro yɛɛ aso maa nsɛm a ɔkae no. 7 Ná nnipa pii wɔ ahonhom fĩ,+ na wɔde nne kɛse teɛteɛɛm fii wɔn mu fii. Bio nso, mmubuafo+ ne mpakye pii nyaa ayaresa. 8 Enti anigye kɛse baa kurow no mu.+ 9 Afei na ɔbarima bi wɔ kurow no mu a wɔfrɛ no Simon, a na odi asumansɛm+ ma Samaria man no ho dwiriw wɔn, na ɔka sɛ ɔyɛ onipa kɛse.+ 10 Na wɔn nyinaa, efi akumaa so kosi ɔkɛse so, tie no ka sɛ: “Oyi ne Onyankopɔn Tumi a wobetumi afrɛ no Ɔkɛseɛ.” 11 Enti na wotie no efisɛ na ɔnam n’asumansɛm so ama wɔn ho adwiriw wɔn akyɛ. 12 Na bere a wogyee Filipo a ɔreka Onyankopɔn ahenni+ ne Yesu Kristo din ho asɛmpa no dii no, wɔma wɔbɔɔ wɔn asu, mmarima ne mmea nyinaa.+ 13 Simon nso bɛyɛɛ gyidini, na wɔbɔɔ no asu wiei no, ɔde ne ho bɔɔ Filipo;+ na nsɛnkyerɛnne ne ahoɔdenne akɛse a na ɛrekɔ so a ohui no maa ne ho dwiriw no. 14 Bere a asomafo a wɔwɔ Yerusalem no tee sɛ nnipa a wɔwɔ Samaria no agye Onyankopɔn asɛm+ no, wɔsomaa Petro ne Yohane kɔɔ wɔn nkyɛn, 15 na wɔkɔbɔɔ mpae maa wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya honhom kronkron;+ 16 efisɛ na ennya mmaa wɔn mu biara so, na mmom asu ara na na wɔabɔ wɔn wɔ Awurade Yesu din mu.+ 17 Ɛnna wɔde wɔn nsa koguu wɔn so,+ na wofii ase nyaa honhom kronkron. 18 Afei bere a Simon hui sɛ asomafo no nsa a wɔde gu obi so no na ɛma onya honhom no, ɔyɛe sɛ ɔrema wɔn sika,+ 19 na ɔkae sɛ: “Momma me tumi yi bi, na obiara a mede me nsa begu no so no anya honhom kronkron.” 20 Na Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo ne wo dwetɛ nyinaa nsɛe, efisɛ wususuw sɛ wɔde sika na enya Onyankopɔn dom akyɛde.+ 21 Wunni kyɛfa anaa apɛgyade biara wɔ asɛm yi mu, efisɛ wo koma nteɛ wɔ Onyankopɔn anim.+ 22 Enti sakra w’adwene wɔ saa bɔne a woayɛ yi ho, na srɛ Yehowa+ sɛ, sɛ ɛbɛyɛ yiye a, ɔmfa nea woabɔ ho pɔw wo koma mu no mfiri wo; 23 na mahu sɛ woyɛ bɔnwoma a edi awu+ ne amumɔyɛ hama.”+ 24 Ɛnna Simon buae sɛ: “Monsrɛ Yehowa mma me,+ na nea moaka yi mu biara amma me so.” 25 Afei bere a wodii adanse fefeefe na wɔkaa Yehowa asɛm no, wɔsan kɔɔ Yerusalem, na wɔkaa asɛmpa no wɔ Samariafo nkuraa bebree ase.+ 26 Na Yehowa bɔfo+ ka kyerɛɛ Filipo sɛ: “Sɔre na kɔ anafo, ɔkwan a efi Yerusalem kɔ Gasa no so.” (Eyi yɛ sare so kwan.) 27 Ɛnna ɔsɔre kɔe, na hwɛ! Etiopiani+ piani+ bi ni, otumfoɔ a ɔhwɛ Etiopiafo hemmaa Kandake sika nyinaa so. Ná wakɔ Yerusalem akɔsom,+ 28 na ɔte ne teaseɛnam mu resan akɔ a ɔrekenkan odiyifo Yesaia nhoma no.+ 29 Enti honhom no ka+ kyerɛɛ Filipo sɛ: “Twiw bɛn teaseɛnam yi.” 30 Filipo tuu mmirika kɔɔ ho na ɔtee sɛ ɔrekenkan odiyifo Yesaia nhoma no, na ose: “Wote nea worekenkan no ase?” 31 Ɔkae sɛ: “Sɛ obi ankyerɛ me a, mɛyɛ dɛn atumi ate ase?” Na ɔsrɛɛ Filipo sɛ ɔmforo mmɛtena ne nkyɛn. 32 Kyerɛwnsɛm mu asɛm a na ɔrekenkan no ni: “Wɔde no bae sɛ oguan a wɔrebekum no, na sɛnea oguammaa tɔ mum wɔ nea otwitwa ne ho nhwi anim no, wammue n’ano.+ 33 Bere a wɔbrɛɛ no ase no, wɔammu atɛn amma no.+ Hena na ɔbɛkyerɛ n’ase? Efisɛ wɔafa ne nkwa afi asase so kɔ.”+ 34 Opiani no bisaa Filipo sɛ: “Mesrɛ wo, hena na odiyifo no ka ne ho asɛm yi? N’ankasa anaa onipa foforo?” 35 Filipo buee n’ano,+ na ofi Kyerɛwnsɛm+ mu asɛm yi so kaa Yesu ho asɛmpa kyerɛɛ no. 36 Afei bere a wɔnam kwan so rekɔ no, wokoduu nsu bi ho, na opiani no kae sɛ: “Hwɛ! Nsu na ɛda hɔ yi; dɛn na esiw me asubɔ ho kwan?”+ 37 —— 38 Ɛnna ɔmaa teaseɛnam no gyinae, na wɔn baanu nyinaa sian kɔɔ nsu no mu, Filipo ne opiani no; na ɔbɔɔ no asu. 39 Bere a wofii nsu no mu puei no, ntɛm ara na Yehowa honhom de Filipo kɔe,+ na opiani no anhu no bio, na ɔde ahurusi toaa so kɔɔ ne kwan. 40 Na Filipo kopuee Asdod, na ɔkɔfaa asase no so toaa so kaa+ asɛmpa no kyerɛɛ nkurow no nyinaa kosii sɛ oduu Kaesarea.+
Asomafo Nnwuma 8